Ny PsyOp 'fanam-pandrosoana lalina' noho ny fanesorana ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 2): Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 21 Oktobra 2019	• 10 Comments
Mankasitraka ny fomba nampiasan'ny milina PsyOp ny fomba rehetra ahafahana manangona io savony mahafinaritra 'fianakavian'i Ruinerwold' tena sandoka io. Izy io dia sarisary sarimihetsika lehibe, izay ametrahana bilaogy sy lahatsary atambatra. Mazava ho azy fa "ideologie paranoid" izany, satria tsy nanao zavatra tahaka izao ny fanjakana ary John de Mol miaraka amin'ireo studio filma nataony toy ny tompon'ny ANP dia mety tsy hanao izany mihitsy mihitsy. Tena mahazo vola amina miliara an'arivony tapitrisa izy ary tsy mila toerana ho amin'izany.
De sarimihetsika mahafinaritra ny 'rainy matoatoa' Gerrit Jan van Dorsten (aka John Eagle) an'ny 'fianakavian'ny matoatoa dia nohodidinina, satria raha tsy izany dia heverinao fa mety ho lalina lalina izany. Azonao atao ny mamaky ny script manitikitika ity lahatsoratra Volkskrant ity na ato Tsy misy fomba. De Telegraaf, satria mpanabe lehibe indrindra amin'ity PsyOp ity, dia manery ny mpamaky ho lasa mpikarama an'isa. Azonao atao ny miasa manodidina an'io amin'ny alàlan'ny fanokafana lahatsoratra ao amin'ny Mode Incognito (Google Chrome). Avy eo dia azonao ilazana ny bokin'ny zazalahy mahafinaritra (tahaka izao) mbola vakiana maimaimpoana.
Misy tantara lehibe noforonina izay hisintona anao amin'ny karazana fikarohana toa an'i Dan Brown. Izahay Tandre dia mahita izany mahafinaritra. Mankafy izany isika. Raha tsy marina ilay izy, dia mbola tantara manaitra foana. Fa nahoana no tsy marina ny zavatra toy izany? Ary nahoana ny haino aman-jery no mandeha amin'ireto olana rehetra izao? Eny ary misy ambany roa ao amin'ity PsyOp ity. PsyOp (fanafohezana ho: fandidiana psikolojika) dia ampiasaina amin'ny fanjakana iaraha-miasa amin'ny haino aman-jery ataonao mba handresena lahatra ny olona amin'ny lalàna vaovao izay tsy ekeny mihitsy izany. Noho izany dia tsy maintsy milalao azy ireo ara-tsaina aloha. Noho izany dia mamorona olana ianao ary manaparitaka an'io olana io amin'ny haino aman-jery. Namoaka fahatezerana teo amin'ny vahoaka ianao tamin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao mitovy ihany. Ao amin'ny media sosialy, ny tafika trolanao dia vonona hanaisotra izay rehetra mitsikera. Avy eo ianao dia vonona ny vahaolana amin'ny vahaolana tianao hampahafantarana. 'Olana, fihetsika, vahaolanadia antsoina hoe io lalao psikolojika.
Ny vahaolana teo amin'ny talantalana tamin'io opera opera io dia mazava tsara hatramin'ny voalohany. Ny fanjakana dia te-hijery any aoriana ny varavarana rehetra. Raha mbola mila valin'ny fikarohana avy amin'ny mpampanoa lalàna ianao, dia tokony ho esorina tsara izany tokonam-baravarana izany. Noho izany mila mamorona olana ianao ao amin'ny media izay mahatonga ny rehetra hieritreritra “Eny, tsia, izany dia tsy azo atao intsony. Misy zavatra mila atao momba an'io!Ilay raim-pianakaviana (miaraka amin'ilay anaram-bazaha tsara tarehy antsoina hoe John Eagle) dia nanana ny fivavahany ihany koa ary nitazona ny zanany hiala amin'ny rafi-pampianarana mahazatra. Efa hitanao sahady ianao: miohatra amin'ny olona maniry hanao fampianarana any an-trano avy hatrany ianao. "Ny anton'ity fampianarana an-trano ity dia ny hoe 'sekoly an-trano' izay nitondran'i Gerrit Jan ny zanany, tampoka tamin'ny fitsipiky ny fanjakana.", Hoy ny filazan'ny haino aman-jery ato amin'ity andiany savony ity. Raha fintinina: raha tsy ekenao ny fitsipiky ny fanabeazana ho an'ny fanjakana amin'ny ho avy, dia ampifandraisina amin'io John Eagle antsoina hoe eccentric io, izay nomena anarana hoe John Eagle, ary raisina ho toy ny mampisaraka ny zanakao amin'ny tontolo ivelany ianao.
Koa amin'ny sekoly ambaratonga voalohany dia ilazana ny zanakao fa tsy zazalahy na zazavavy izy ity, fa hoe mbola afaka mifidy ny lahy na vavy izy dia afaka miova fo, ary raha tsy tena tianao ilay izy dia alao ny zanakao any am-pianarana ianao izao manomboka izao 'raiamandreny ».
Betsaka ny top double ao amin'ity PsyOp ity. Izy E! Diovy ny ranoo sy ny zaridainanao manokana? Avy eo ianao dia olona hafahafa toa an'i John Eagle. Te hanao hazo ve ianao ary manamboatra izay entinao? Avy eo ianao dia olona hafahafa toa an'i John Eagle. Manana weblog ve ianao ary manoratra zavatra ara-panahy? Avy eo ianao dia olona hafahafa toa an'i John Eagle. Ny bilaogin'i John Eagle dia mazava ho azy fa sandoka toy ny horonan-tsary. Fihetsika tsara tarehy; mpanoratra mpanoratra tsara! Efa nijery sarimihetsika ve ianao ary very tanteraka amin'ilay sarimihetsika ary nahatsapa fa efa nisy izany? Izany no mitranga ankehitriny. Ny studio film an'ny John de Mol dia manana ny fomba rehetra hamoronana horonantsary. Iza no milaza aminao fa ny fika sy ny foronina tsy mifangaro rehefa manana ny teknika rehetra i John de Mol mba hampifangaroana io savony io? "Eny, fa izy ireo dia samy manana ny vavolombelona nahalala an'io lehilahy io na ny fianakaviana". Eny, sahala amin'ny sarimihetsika. Tena mila miditra amin'ny fitsipiky ny lalina ianao. Azonao atao ny mahatonga ny olona hiseho ho toy ny zavamaniry sy 'tena' amin'ny filma, tafatafa, ao anaty tantara, ao anatin'ny tantaran'ny media sosialy, sary, feo, tanora, antitra, sy ny sisa.
Niresaka matetika momba ireo teknika ahafahana mamorona ireo toetra lalina aho. Te-hamerina eto aho ho an'ireo mpamaky vaovao. Satria raha manaraka ny vaovao isan'andro ianao dia tena zava-dehibe ny hahafantaranao an'io lohahevitra io, satria ho hitanao hoe inona ny teknika azo ampiasaina ho an'ny filalaovana ny olona fotsiny. Tena mora.
Afaka milaza isika miaraka amin'ny fahatokisana fa avy amin'ny fomba fijery ara-teknika dia tsy misy na inona na inona hisorohana ny 'fianakaviana matoatoa' amin'ny PsyOp. Izany dia vao fiomanana volana vitsivitsy monja. Mazava ho azy fa mbola afaka hieritreritra ianao:Eny, fa ilay tranobe tao Zwartsluis tokoa ve dia fivarotana kilalao?"Efa mba nankany Zwartsluis ve ianao? Sao dia misy akoho io aza maniry an'izany eo?
Mety hampiasa io PsyOp io ihany koa ny fanjakana mba hitrandraka karazana torolàlana ho an'ny 'manala hevitra'. Izany no nahatonga ny George Orwell 1984 nihevitra ny polisy ho tsara toy ny zava-misy. Ny olona dia mikepoka ny tongotr'i Peter R. de Vries amin'ny sidina Transavia. Vakio eto nitohy tamin'ny ampahany 3.
Lisitry ny rohy loharano: bnr.nl, wikipedia.org, volkskrant.nl, geenstijl.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl
Ny 'fianakaviana matoatoa' PsyOp (asa ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra ny 'polisy misahana ny saina'
Tags: bilaogy, blogspot, Eagle, Featured, Gerrit Jan van Dorsten, John, psyop, ara-pivavahana, Rock, fianakaviana matoatoa, raim-pianakaviana
21 Oktobra 2019 ao amin'ny 11: 15
Raha misy zavatra mazava Fake ... manana ny horonam-panjakana foana ianao izay miambina ny valiny:
21 Oktobra 2019 ao amin'ny 14: 40
Izay efa nampitandremako nandritra ny taona maro tao amin'ny tontolo manodidina ahy izao dia manohintohina ny ho tanteraka. Ireo mpamono olona rehetra "Oh, tsy handeha haingana izany.", "Eto ny fanjakana hiaro antsika.", "Ny ankamaroantsika dia tsy izy ireo."
Taorian'ireto farany dia nialoha ny niainga aho ary nifindra monina satria tonga ny fehin-kevitra fa ny salan'isa Neanderlander dia tsy mifoha mihitsy ary noho izany dia tsy nisy 'maro an'isa' tao Madurodam.
Tsy maintsy ho tonga amin'ny lafiny rehetra fa ny polisy dia afaka mitifitra eo am-baravarana eo amin'ny làlan'ny mpiasa NSB eo an-toerana. Inoffizieller Mitarbeiter sy ny zanakareo dia afaka manaisotra azy tsy mila manamarina ny tenany. Ary miaraka amin'ny teknolojia rehetra, tsio-drivotra ny manodino ny tranonao amin'ny lavitra ary manala ny sakana rehetra.
Ary noho izany dia afaka mitohy ny fiambenana vitsy an'isa hiambina ny andian'ondry ... Miambina sy Mpanompoa. Madurodam, milamina avokoa izy rehetra fa sariaka nefa misy mamitaka ambany ...
21 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 34
"Karazan-tsoka iray momba ny eritreritra feno tsikombakomba sy fomba fijery ara-pivavahana" .. De Telegraaf dia manosika ny psyop mankany amin'ny polisy. Ny anarana Martin Vrijland dia mbola tsy voatonona, fa ny rohy subliminal kosa dia efa naorina tsara. Ny tsikera rehetra an'ny fanjakana dia mifamatotra amin'ny 'rainy matoatoa' sy ny 'fianakavian'ny matoatoa'.
(misokatra amin'ny fomba incoginto an'ny Google Chrome)
21 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 40
Ary raha manohintohina ny fianjeran'ilay lehilahy ny PsyOp dia mety ho hita ao anaty zaridaina (na any amin'ny toerana hafa) ilay fatin'ilay vehivavy nanjavona tsy hita maso. Avy eo dia mahazo fampivoarana lehibe ny tantara.
21 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 44
azonao atao ny manome azy io satria ny ankamaroan'ny mpanohitra dia efa voafandrika ary vetivety rehefa tonga ny fotoana mety ho 'olona misafotofoto' miaraka amin'ny fanakorontanana fitondran-tena eo ambany lakile sy lakile ... Ny teny junta dia hanjavona tsy ho ela amin'ny mety ho azo atao ireo psychopaths ireo dia anisany.
21 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 45
Soa ihany, ireo mpitsabo izay afaka mikarakara ireo olona ireo dia efa vita amin'ny fampianarana.
Naomi Hoogeweij dia efa manantena azy io:
21 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 59
tsy fisian'ny sadista ao madurodam ...
nanoratra i naomi:
7 May 2019 amin'ny 12: 49
Rahavavy Naomi dia hitondra anao amin'ny fitiavana 🙂
Tsy maintsy omeko anao ianao, mitovitovy hatrany amin'ny fijerinao Salmon 😉
21 Oktobra 2019 ao amin'ny 16: 05
Ny olona iray mikorontana izay mety nesorina tany amin'ny aretin-tsaina raha ny fianakaviana na ny mpifanila trano no afaka nampitandrina ny polisy sy ny lalàna Edith Schippers, ka izay rehetra tsy nitovy dia nikatona ho fanaraha-maso.
Inoantsika fa olona manohana ny tsikombakomba?
21 Oktobra 2019 ao amin'ny 16: 27
mazava ho azy fa tsy ny finiavana hijanona ao amin'ny radar any madurodam. Araka ny tokony ho an'ny mpanompo sivily tsara dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny radar ianao ary mandoa hetra betsaka araka izay azo atao ary mandoa vola hatrany amin'ny alàlan'ny fanaovana izany.
Ahoana no fomba nijanonan'ny fianakaviana avy ao Ruinerwold tao ambanin'ny radara nandritra ny fotoana ela?
22 Oktobra 2019 ao amin'ny 03: 20
Lahatsoratra matanjaka indray Martin! Soratanao ambony.
« Ny 'fianakavian'ny matoatoa' PsyOp (asa ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra ny 'polisy polisy'
Ny PsyOp 'fanam-pinoana lalina' noho ny nanesoranao ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 3) »
Total visits: 13.841.253
Camera 2 op Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.